အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: ထူးထူးဆန်းဆန်း ရွေ့လျားနေသော ကျောက်တုံးများ
39 Responses to “ထူးထူးဆန်းဆန်း ရွေ့လျားနေသော ကျောက်တုံးများ”
တကယ်ကို ထူးဆန်းပါတယ် မမရယ် မမပိုစ့်တင်ပေးလို့ သာသိတာ
Zin Ei said...
သဘာဝရဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ လျိူ့ဝှက်ချက်တွေ ပေါ့နော် .......... ဓါတ်ပုံလေးတွေက လှလိုက်တာ ..... သွားတောင် သွားချင်လာပြီ :-))
ထူးဆန်းတယ်နော် ဒါကြောင့် ကောင်းကင်ပြာကြီး ရဲ့ အောက် မှာ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ မရှိဘူးလို့ ပြောခဲ့ ကြတယ်ထင်တယ် ကျေးဇူးနော်ညီမ
ထူးထွေ သည့် အံရာ သော် .......ဟော်ဟော်ဟော် အနန္တစကြာ ၀ဠာကြီးက ပြောမပြတတ်လောက်အောင်
နတ်ရှိုင်းပေသကိုး မမချောရဲ့ လာဖက်သွားပါတယ် ဂူဂလ်ကနေလဲ ရှာရှိပါအုံးမယ်...။
(ကျောက်တုံးတွေ တက်စီးပြီး လိုရာမောင်းနှင်လို့ရရင် ကောင်းမယ်နော်:P)
ပညာရှင်တွေက ဘာပြောလဲလို့ သိချင်လိုက်တာ.. သူတို့လည်း သေချာမသိသေးဘူးထင်တယ်.. ကမ္ဘာကြီးမှာ အဖြေရှာလို့မရနိုင်တာတွေ အများကြီး ရှိသေးတယ် ထင်တယ်နော်..
သွားလည်ဦးမှ.....ကျောက်တုံးပေါ်ငုတ်တုပ်ထိုင်နေတဲ့ သရဲနဲ့တွေလဲ ဇတ်လမ်းရတာပေါ့
ထူးဆန်းလွန်းလို့ စိတ်ဝင်စားတယ်။ ဘယ်အချိန်မှာရွေ့လဲ၊ ဘယ်နှုန်းနဲ့ရွေ့လဲ၊ လမ်းကြောင်းဘာ့ကြောင့်ပြောင်းလဲ????????????? ပဟေဠိတွေများလိုက်တာနော်။
သံလိုက်လို စွဲငင်အားတွေများ အဲဒီကျောက်တုံးတွေထဲမှာ ရှိနေသလား...
မျှဝေတာ ကျေးဇူးပါ မချောရေ...
စာလုံးပေါင်း သတ်ပုံအတွက် ကျေးဇူးနော်...ညီမက သတ်ပုံညံ့တယ်...
နောက်လည်း မှားတာတွေ့ရင် ပြင်ပေးပါအုံးနော်..
တကယ်ကြီး စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်နော်၊ မချော ပြောမှ သိတာ၊ လမ်းကြောင်းတွေက နက်နေတယ်၊ အံ့သြစရာကြီး၊ အထူးအဆန်းတွေမျှဝေပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊
စာတွေအများကြီးရေးနိုင်လို့လည်း ချီကျူးပါတယ်၊ စကားမစပ် မချောက .. တကယ်ချောတယ် :)
တော်တော် စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတယ်နော်။ ရှာရှာဖွေဖွေ တင်ပြပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်း))
ပြီးခဲ့တဲ့ လက ခရီးထွက်နေလို့ မရောက်ဖြစ်ခဲ့ဖူး။ ဒါပေမယ့် ပြီးခဲ့တဲ့ သုံးရက်အတွင်း အကုန်လာဖတ်သွားပြီးပြီ။ ဖတ်တာများတာနဲ့ ကွန်မန့်သီးသန်စီ မထားခဲ့တာပါ။ ပို့စ်အားလုံးအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..လို့.
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တခေါက်လောက်တော့ ရောက်ဖူးချင်မိသား..။
ညီမလေးတို့ စိတ်တွေ တခါတခါ ဘယ်လိုရွှေ့မှန်းမသိ ရွှေ့သွားသလိုထင်တယ်နော် ။ သဘာဝတရားကြီးက ထူးဆန်းတယ်။ ပဟေဠိလဲဆန်တယ် ။ အဖြေရှာရလဲ ခက်တယ် ....
ဒါ သရဲတွေ ရွေ့ပေးတာနဲ့ တူ၏ ...း)
အဲဒါ ဖတ်ဖူးတယ် .. ဘယ်မှာလဲ မှတ်မိတော့ဘူး ..
တော်တော်ထူးဆန်းအံ့သြဖွယ်ကောင်းတဲ့ ရွေ့လျားနေတဲ့ ကျောက်တုန်းတွေ အကြောင်း ဖတ်ခွင့် တွေ့ခွင့် ရတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ.
ဘာကြောင့်ဒီလို ဖြစ်ရတယ် ဆိုတာ သိပါတယ်။
ဒီလို လူအသွားအလာ ပြတ်လပ်လွန်းတဲ့နေရာ ဖြစ်လို့ အင်မတန် ခေါင် တာကြောင့်
ကျောက်တုံးတွေက ပျင်း လို့ ပြေးတမ်း လိုက်တမ်း ကစားကြတာပါ။
မြေကြီးရဲ့ အောက်က မမြင်နိုင်တဲ့ ဆွဲငင်အားတစ်ခုကြောင့်များလားး???????
နေရာအနှံ့ ကိုရွေ့နေတာလားးး တဖက်တည်းကို ဦးတည်ပြီးရွေ့နေတာလားးးး??????
တော်တော် ထူးဆန်းတယ်...စဉ်းစား စ၇ာတွေချည်းပဲ.........
တော်တော်လေးကို အံသြဖို့ကောင်းတယ် မမရေ..။
discoveryက မပြဘူးလား မသိဝူးနော် ။
မျှဝေပေးတဲ့ မမချောကို ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်..
ထူးဆန်းထွေလာလေးတွေ ဖတ်ရတာ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။
မချော ကျောက်တုံးတွေက ခပ်ထူးထူးဆန်းဆန်းပဲနော်... ကမ္ဘာအတွင်းပိုင်း အပူရှိန်ကြောင့်လို့ ၀တ်ရည်တော့ ထင်တယ်... :)
စိတ်ဝင်စားစရာလေးပဲ မချောရေ... တစ်ခါကတော့ဖတ်ဖူးတယ်.. ဒါပေမယ့် မမှတ်မိတော့ဘူး..း)))
ဂျူ စာတွေ မဖတ်ဖြစ်၊ မဖတ်နိုင်တာကြာဘီ။
ထူးဆန်းတယ်နော် ... ဒါမယ့်လေ အပြင်မှာ အဲလိုရွှေ့ လာတာ တွေ့ လိုက်ရရင် သေသွားမလား မသိဘူး .. သရဲ ဆိုပြီးတော့လေ ... ;P
သံလိုက် ( လျှပ်စစ် ) တွေနဲ့ ကမ္ဘာ မှာ ထူးဆန်းထွေလာ ဖြစ်နေတာက်ို ဟေုသုတ ဖြစ်ရပါတယ်။
ဒါများ လွယ်လွယ်လေး....သရဲခြောက်တာက လွယ်လို့ ဘာများဖြစ်မတုန်း.... :D
ရှူး....တိုးတိုး မြန်မာပြည်က ဂန္ဘီရ ဆရာတွေ တွေ့ သွားရင် သက်ဝင်ကျောက်ဆိုပြီး လာကောက်နေဦးမယ်။
ကျွန်တော်က သဘာဝတ၇ားတွေကို စိတ်ဝင်စားတော့ 
ဒီကျောက်တုံးလေးတွေက မှော်အတတ်ပညာများ တတ်ထားသလား ချောရေ...:D
Thanks so much for sharing ur knowledge ......
အင်..ခေတ်တွေလဲပြောင်း ကမ္ဘာတွေလဲပြောင်း.. ကျောက်တုန်းတွေလဲနေရာပြောင်း photoshop ရဲ့ ပညာတွေလည်းပြောင်းလဲတိုးတက်လာပြီထင်ပါရဲ့
မိုက်တယ်............စိတ်လဲဝင်စားတယ် တခါမှ မကြားဖူးဘူး......